အရက်မူးနေ (သို့) အမြင့်: အကောင်းဆုံးညကဘာလဲ။ - သတင်း
အရက်မူးနေ (သို့) အမြင့်: အကောင်းဆုံးညကဘာလဲ။
သင်ညအချိန်တွင်ကောင်းသောအချိန်ရှိလိုပါကသင့်တွင်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအရက်ဖြင့်သောက်ပါ၊ အရူးကဲ့သို့အရူးဖြစ်ချိန်တွင်သင်၏အောက်နှုတ်ခမ်းကိုဝါးမျိုပါ၊ သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးလုပ်ကာချုံ၌နိုးနိုင်သည်။ (ဟုတ်ကဲ့၊ ကောင်းမွန်သောအချိန်ရရန်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိနိုင်သေးသည်။ အချို့သောလူများမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများသောက်စားခြင်းနှင့်မသောက်ကြသော်လည်း၊ ထိုသူများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် uni ကိုအဆုံးသတ်လိုသောအပေါက်များဖြစ်သည်။ သင်သာလျှင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုပါ။
(ဘယ်သူမှအရက်မူးပြီးမသောက်သင့်ဘူး။ မင်းသာဆိုရင်တော့မင်းဟာညအမှောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးရပြီးပြီ။ )
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Never Have I Ever ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်သောက်နိုင်သောမြန်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အငှားယာဉ်ဝယ်မည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ ယ်မည်နည်း၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ကြိုတင်မှာယူရမည်။ စစ်မှန်သောသောက်သုံးသူများသည်သူတို့၏ထုပ်ပိုးမှု ၈ အထုပ်သို့မဟုတ်ဗော့ဒ်ကာရောစပ်ခြင်းနှင့်အတူမီးဖိုချောင်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ အငှားယာဉ်ရောက်ရှိလာချိန်တွင်မည်သည့်အရည်ကိုမှမထားသင့်ပါ။
သငျသညျအတူတကွတန်းတူရပ်ကွက်သို့ဂီယာဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူချင်းမူးသူခေါင်း - ခေါင်းများကဝိုင်း, backroom သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိပ်ခန်းထဲမှာနေပါတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ဒီအချိန်ကစပြီးခင်ဗျားရဲ့ညကပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ pres မှာလူမှုရေးသင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်အောင်မြင်စွာအပြာ rizla သို့အသီးအသီးအeight္ဌမတံဆိပ်ခတ်သည်။ သို့သော်မီးဖိုချောင်သို့သင်ရောက်နေသူတိုင်းကိုသတိပေးရန်အတွက်ခရီးတစ်ခေါက်သွားလိမ့်မည်။
ကလပ်သို့သွားသောလမ်းတွင်သင်၏အုပ်စုရှိ lightweights များသည်တက္ကစီရှေ့တွင်သင်ရပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်ယာဉ်မောင်းသည်အဆိုင်း (သူကအမြဲတမ်းမနက် ၆ နာရီ) ပြီးသူစဉ်းစားသည့်အရာကိုအပြီးသတ်စကားပြောနေသည့်အချိန်တွင်အနည်းငယ်မျှသာလက်ထဲမှစတင်ထွက်ပေါ်လာသည်။ နက်ရှိုင်းသောအိမ်၏။ သင်ကလပ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မှောင်နေသည့်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူများအား neck ည့်သည်များကသတိမထားမိဘဲသင်၏ဘေးတွင်ရပ်နေသောသူစိမ်းများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနွေးထွေးစေခြင်းမရှိဘဲတန်းစီထဲထည့်သွင်းရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအားလုံးနေဆဲအတော်လေးသမ္မာသတိရှိကြလော့နေစဉ်, စကားပြောဆိုမှုသည်မည်မျှအေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးထပ်ခါတလဲလဲတိုင်ကြားမှုများထက်အများကြီးထပ်မံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သငျသညျလွန်ကဲကဲသင့်ရဲ့အချိန်ကိုတက်လွဲချော်သွားတယ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်သင်ရုံသေးတက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်နေဆဲတန်းစီအတွက်အခြားလူတိုင်းကဲ့သို့ဘူးခွံ swilling နေကြသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်လား။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှသင်၏ပါးစပ်ထဲသို့ရွေ့လျားသွားပြီးနောက်သင်၏ပထမဆုံးသန္ဓေသားလောင်းကိုဆေးကြောလိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး Class A မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖမ်းမိခံရအချို့အလေးအနက်ဒုက္ခ၌ဆင်းသက်နိုင်အဖြစ်သောက်သူများထက် bouncers နှင့်အတူအစွန်းအပေါ်အနည်းငယ်ပိုပါလိမ့်မယ်။ သင်၏မိဘများကအမြဲတစေပြောဆိုသောစကားကိုသတိရပါ - မူးယစ်ဆေးဝါးမလုပ်ပါနှင့်၊ ကျောင်းတွင်နေပါ။
မည်သူမဆိုတက်လာမယ့်? (ရုပ်ပုံ - ဂျော်ဒန်ဘာကလေ)
သငျသညျအကအတွက် BA ဘွဲ့အပေါ်ကိုးခမ်းနားတစ်နှစ် splashing လျှင်, ယခုအဘယ်ကြောင့်လူတွေကိုပြသရန်အချိန်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချိုမြိန်။ အဆင်းလှသောပုံစံများသည် GCSE ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာတွင် A * ရလိမ့်မည်ဟုထင်နေကြသောကျန်သူများအတွက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအကအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်? သငျသညျမှာတကယ်ကောင်းပါတယ်မဟုတ်လျှင်လှုပ်ရှားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကျောင်းသားများ dilated? တစ် ဦး buzz Feeling? သင်လက်ျာစပီကာများ၏ရှေ့မှောက်၌ 3cm မတ်တပ်ရပ်သည်အထိ DJ သမားဆီသို့သင်သွားရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ သင်၏အကအခုန်များသည်ရွေ့လျားမှုအမျိုးမျိုးမဟုတ်သောကြောင့်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရန်သင်အားဒေါင်လိုက်ဒေါင်လိုက်ပျံတက်နေသည့်လေကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ ချွေးသည်သင်၏မျက်နှာနှင့်သင်၏ရှပ်အင်္ကျီကိုစိုစွတ်သောလက်သုတ်ပုဝါအဖြစ်သို့စတင်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူသင်ကြည့်ကောင်းတုန်းကြည့်ကောင်းသည့်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းမဆိုရှိခဲ့သည်။ jitterbugging သည်သင်၏အားသာချက်မဟုတ်ပါက၎င်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည့်စွမ်းအင်သည်ဒဏ္toာရီဆန်လွန်းသည့်အတွက်သင်၏မေးရိုးသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည်။ သငျသညျယခုခံစားမိကြဘူးဆိုရင်, သင်နံနက်ယံ၌လိမ့်မယ်။
သငျသညျညဉ့်တစ်လျှောက်လုံးဗော့ဒ်ကာနှင့်ကိုကာကိုလာမှ Jagerbombs အထိအဖျော်ယမကာပြောင်းလဲမှုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးသင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုမှဖြစ်လျှင်စျေးကွက် ၀ ီစကီနှင့်ရှမ်ပရီများဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဒါဟာအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကိုကြည့်ရတာနဲ့တူတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးအရအခွင့်မသာသည့်အနေဖြင့်£ 8 အတွက် Jagerbombs သုံးခုကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်နောက်နေ့သင်အစာစားရန်သဘောတူညီမှု ၅၀ တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ကောင်းသောအကြံအစည်နှင့်မတူပါ။
Wimbledon တွင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အပူဒဏ်ကိုခံယူရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသင်ယခုနားလည်နေပြီဖြစ်သည်။ သငျသညျလန်းဆန်းရှာမစ်ရှင်အပေါ်နေ, ဒါကြောင့်သင်ကသင်၏ည၏ကျန်တစ်ဝက်ကျော်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ရှိရာရေဘူတာရုံဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်သင်နှင့်တူညီသောအနေအထားတွင်ရှိနေသောကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအခမဲ့ရေလောင်းနေသည့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်လူအုပ်စုကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင်ကံကောင်းပါကဘားသို့သွားပြီးသင့်တော်သောသောက်စရာကို ၀ ယ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် Red Stripe ၏လုပ်နိုင်သောအရာထက်ပိုပြီးဘာမှမထွက်ရန်လှေကိုသင်မထုတ်နိုင်ပါ။
ည၏ဤအချိန်တွင်မိတ်လိုက်ရာသီသည်အချိန်တိုင်းဖြစ်သဖြင့်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအတွက်သင်ဘာမှမလုပ်ပါ။ သော်လည်းသင်၏အမူအကျင့်ကိုသတိရပါ၊ သင်အမှန်တကယ်မလုံလောက်သေးသောအခြေအနေကိုရောက်ရန်သင်မစတင်မှီစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။ အဖြေမရှိပါကသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုရှာပါသို့မဟုတ်အိမ်သို့ပြန်သွားပါ။
ငါး (ရုပ်ပုံ: ဂျော်ဒန်ဘာကလေ)
ဂျော်စမစ် - လှပသောလူမိုက်လေး
သင်ကိုယ်တိုင်အဲဒီမှာသူစိမ်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့လတ်တလောရိုက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုသွန်းလောင်းနေတယ်ဆိုရင်အိပ်ရာဝင်ချိန်ရောက်ပြီ။ သင်တို့တွင်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဤနေရာသည်ဤနေရာဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဆေးလိပ်သောက်သူများအနေဖြင့်သင်၏ ciggies များအားလုံးကိုခိုးယူရန်အသင့်ပြင်ထားပါ။
သင်တစ် ဦး fag pinch နှင့်ပျော်ရွှင်မှုသင်၏ခံစားချက်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေ, သို့မဟုတ်သင်ကသင်၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုသင်မည်မျှချစ်ကြောင်းပြောပြချင်သောကြောင့်, ဒီမှာဖြစ်စေ။ သငျသညျလညျးသေးမလာသေးနှင့်ငါသေးခံစားမိဘူးကြောင့်သင်ကျဆင်းသွားကတည်းကဘယ်အချိန်မှာခဲ့သည့်အခါတိုင်းလူတိုင်းကိုမေးသည်စောင့်မတော်မူကြောင်းကိုတ ဦး တည်း oddball သို့ဝင်တိုးလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခံရပြီးဖြစ်ပါက၊ သင်သည်မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မှမရှိကြောင်းသတိရပါ။ ငါးကိုယူ၊ အေးဆေးအေးဆေးပြီး ketamine မျဉ်းတစ်ချောင်းယူပါ။
၎င်းသည်ည၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသော kebabs များကိုညှပ်။ သင်၏ gullet ကိုအမူအကျင့်များနှင့်ပြုလုပ်ရန်ဖိအားမပေးနိုင်ဘဲအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည်။ သင်အရက်ပြောနေတာဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းသင်, အစားအစာအရသာ 10 ကြိမ်ပိုကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ တကယ့်လမ်းလျှောက်မှုဟာလူတွေနဲ့အတူနေသမျှကာလပတ်လုံးပျော်စရာကောင်းတယ်။
ဤသည်ပွဲတစ်ပွဲည၏အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တွေ့ကြုံရတော့မည်ဖြစ်သောငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော comedown သည်သင်၏အဖော်ဖြစ်သူ Freshers နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်နောက်တစ်ခန်းတွင်သူနှင့်သူမတစ်နှစ်လုံးအတူနေခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သငျသညျမစားနိုင်, သင်မသောက်နိုင်, သင်ဤအချက်မှာဆွဲအပေါ်နေလျှင်, ရုံအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ညဉ့်သည်၎င်း၏အတက်အကျများရှိပြီးယခုတွင်၎င်းအားလုံးတန်ဖိုးရှိပါကသင်အလွန်အမင်းအံ့သြသွားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရုံအချို့ Valium ယူ။ pussy ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်။
lyfe xo များအတွက် BFFs